चित्र-विचित्र – Page2– SidhaRekha
२०७३ असार ३१, शुक्रबार १४:४८२०७३ असार ३१, शुक्रबार १४:४८२०७३ असार ३१, शुक्रबार १४:४८ by Sidharekha Online
३१ औँला भएको बच्चा जन्मियो
काठमाडौं, ३१ असार । तपाईको हात र खुट्टाका गरी जम्मा कतिवटा औँला छन् ? पक्कै पनि यसको उत्तर बीस हुनेछ, यदि अपवादलाई छोडिदिने हो भने । तर, चीनमा एकजना यस्तो अनौठो बच्चाको जन्म भएको छ, जसको हात र खुट्टाका गरी जम्मा ३१ वटा औँला छन् । हुनान प्रान्तको पिंगजंग्ची काउन्टीमा जन्मिएको हंगकंग नामक उक्त बालकको दुइ हातमा गरी १५ र दुइ खुट्टामा गरी १६ औँला अर्थात् कुल ३१ औँला छन् । जनवरी, २०१५ मा जन्मिएको यो बालकमा यसरी धेरै औँला हुनुलाई चिकित्सा भाषामा ‘पोलिडेक्टाइलिज्म’ भनिन्छ । मानिस, कुकुर तथा बिरालो लगायतमा यो समस्या जन्मजात नै देखिने गरेको छ चिकित्सकहरू बताउँछन् । जसका कारण हात खुट्टामा अतिरिक्त औँला पलाएका हुन्छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, विश्वमा प्रतिहजार जन्ममा एकजना बच्चामा यस्तो बढी औँला पलाउने समस्या हुन्छ । प्रायः यस्ता अतिरिक्त औँलाहरुलाई सर्जरी गरेर काटिन्छ । ३१ औँला भएको यो बच्चाका अत
२०७३ असार १०, शुक्रबार १६:५०२०७३ असार १०, शुक्रबार १६:५०२०७३ असार १०, शुक्रबार १६:५० by Sidharekha Online
स्मार्ट फोनपछि अब आउँदैछ ‘स्मार्ट सुज’
अहिलेसम्म तपाईंले हाइ टेक्नोलोजी मोबाइल, ल्यापटप तथा कम्प्युटरको स्क्रीनमा मात्रै देख्नुहुन्थ्यो तर अब चाँडै यस्तो प्रविधिलाई खुट्टामा लगाउने तयारी पनि गर्नुस् । गुगल र लेनोवोजस्ता टेक कम्पनीहरू आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टको रुपमा वियरएबल डिवाइस बनाउनमा जुटेका छन् । यदि तपाईं ब्रान्डेड कपडा र जुत्ताका सौकिन हुनुहन्छ भने प्रख्यात टेक ब्रान्ड प्रयोग गर्नको लागि तयार रहनुस् ।
२०७३ बैशाख ४, शनिबार ०७:५०२०७३ बैशाख ४, शनिबार ०७:५०२०७३ बैशाख ४, शनिबार ०७:५० by Sidharekha Online
समाधिबाट ८ दिनपछि उठे बाबा
वैशाख ४, २०७३- ९ दिनअघि समाधीमा बसेका भनिएका पोखराका श्रीवैष्णव कृष्णदासलाई आज समाधीबाट निकालिएको छ । रामघाटस्थित नरनारायण बाबा आश्रममा चैत २५ गतेदेखि उनी समाधीमा बसेका थिए । शुक्रबार बिहान २ सय १६ घन्टापछि उनलाई बन्द गरिएको काठको बाकसबाट बाहिर निकालिएको हो । यस अवसरमा मन्दिर परिसरमा दसौं हजारको उपस्थिति थियो । समाधीबाट उठेपछि उनले आफू मातृभूमिका लागि समाधीमा बसेको बताए । कान्तिपुरमा समाचार छ । उनले बिना अक्सिजन यसरी ९ दिनसम्म बस्नु कुनै चमत्कार नभएर योगबाट प्राप्त क्षमता भएको भन्दै उनले आफ्ना भक्तजनलाई नआत्तिइकन बस्न भनेका थिए । कुनै पनि प्वाल नभएको काठको बाकसमा उनलाई सुताइएको थियो । बाहिरबाट चाबी लगाएर बन्द गरिएको बाकसलाई बालुव र माटोले पुरिएको र माथिपट्टी एक फिट माटो राखेर जमरासमेत उमारिएको बताइएको थियो । यसबारे वैज्ञानिक वा चिकित्सकले भने केही बताएका छैनन् ।
२०७२ माघ १३, बुधबार ०६:४१२०७२ माघ १३, बुधबार ०६:४१२०७२ माघ १३, बुधबार ०६:४१ by Sidharekha Online
पहिलोपटक गाईले दुइ बाच्छा जन्माए
भगीरथ अवस्थी, बैतडी, १२ माघ बैतडीमा एक किसानले पालेको गाईले दुइओटा बाच्छा जन्माएको छ । श्रीकोट गाविस २ खिरेगाउ का राम सिंह बिष्टले पालेको गाईले एकैपटक दुई बच्छा जन्माएको हो । गाईले जन्माएको दुई बाच्छा मध्ये एक बाच्छा र एक बाच्छी जन्माएको स्थानिय कृष्ण बिष्टले जानकारी दिनुभयो । सामान्यतयाः गाई, भैसीले एउटा मात्र बच्चा जन्माउँने गर्छन तर रामले पालेको गाईले दुई वटा बाछा जन्माएको हो । रामले पालेको गाईले मंगलबार दुई वटा बाछाको जन्माएको बिष्टले बताउनुभयो । मंगलवार ब्याएको गाई र बाच्छाको अवस्था सामान्य रहेको बताईएको छ। हाल रामले पालेको गाईको बच्चालाई हेर्नका लागि स्थानियको घुईचो लागेको छ । पशु चिकित्सक नारायण दत्त भट्टले बैतडी जिल्लामै यो पहिलो भएको बताउनुभयो ।उहाले भन्नुभयो “दुई बाच्छा जन्मीनु कुनै आश्चर्य नभएको र जीनका कारणले कहिलेकाही यस्तो हुने गर्दछ” । पेटमा बच्चा विकास हुने क्रममा कोष विभाज
२०७२ माघ ८, शुक्रबार १०:०३२०७२ माघ ८, शुक्रबार १०:०३२०७२ माघ ८, शुक्रबार १०:०३ by Sidharekha Online
अन्तराष्ट्रिय अन्तरीक्ष स्टेशनमा पहिलो पटक फूल फुलाइएको छ । अमेरिकी अन्तरीक्ष संस्था नासाका अन्तरीक्ष यात्री स्कट केलीले टि्वट मार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् । अन्तरीक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकहरुले लामो समयदेखि फूल फुलाउने कार्यमा जुटिरहेका थिए र हालै यो सफलता प्राप्त गरेका छन् । स्मरण रहोस्, अन्तरीक्ष स्टेशनमा यसअघि नै गोभी फलाइसकिएको छ । अन्तरीक्षयात्री स्कट केलीले आफ्नो टि्वटमा अन्तरीक्षमा फुलेको फूलको तस्वीर समेत पोष्ट गर्दै भनेका छन्: अन्तरीक्षमा पहिलोपटक फूल फुलेको छ । उनको एक अर्को टि्वटमा अन्तरीक्षमा जिवनको अन्य रुप पनि रहेका बताएका छन् । आजकल इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा सागसब्जी तथा अन्य खाले वनस्पतीहरु उमार्ने र हुर्काउने विभिन्न प्रयोग भैरहेका छन् । गत वर्ष त्यहाँ सफलतापूर्वक गोभी उमारेर हुर्काइएको थियो । गोभी फक्रिएसँगै त्यसलाई टिपेर फ्रिजमा राखिएको थियो । पछि उक्त गोभ
२०७२ माघ ४, सोमबार १६:२९२०७२ माघ ४, सोमबार १६:२९२०७२ माघ ४, सोमबार १६:२९ by Sidharekha Online
२०७२ पुष २८, मंगलवार ०३:१२२०७२ पुष २८, मंगलवार ०३:१२२०७२ पुष २८, मंगलवार ०३:१२ by Sidharekha Online
डाक्टरले मुक्का हान्दा विरामी खुत्रुक्कै !
रुसको एक अस्पतालमा डाक्टरले एक विरामीलाई मुक्का हानेका छन् । जसका कारण उनी ढले र पछि मृत्यु भएको छ । यो घटना २९ नोभेम्बरको दिन राजधानी मस्कोबाट केही टाढा पर्ने दक्षिणी शहर बेलगर्दमा भएको थियो । सीसीटीभी फुटेजका आधारमा यो घटना सार्वजनिक भएको हो । रुसी सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार सुरुमा विरामीले नर्सलाई हात हानेका थिए । त्यसको जवाफमा डाक्टरले मुड्की हानेका हुन् । घटनाको छानविन गरिरहेका एक अधिकारीेले रुसी टीभीलाई बताए अनुसार यो जानिबुझेर नगरिएको हत्याको मुद्दा हुनसक्छ ।
२०७२ पुष २८, मंगलवार ०३:१०२०७२ पुष २८, मंगलवार ०३:१०२०७२ पुष २८, मंगलवार ०३:१० by Sidharekha Online
ओबामाको कुकुर चोर्न खोज्ने पक्राउ
हामीकहाँ अपराधीहरुले अपराध गरिकेपछि पक्रिन पनि सकस पर्छ पुलिसलाई । तर अमेरिकामा भने एउटा कुकुर चोर्ने योजना बनाइरहेको अपराधीलाई समेत पुलिसले पहिले नै समातेको छ । हुनत, सामान्य खालको कुकुर चोर्नखोज्ने अपराधी कहाँ हो र ? राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कुकुर चोर्ने योजनाका साथ नर्थ डेकोटाबाट वाशिंटन आएका स्कट डी स्कर्ट नामको एक युवक पक्राउ परेको वाशिंटन डिसीको उच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । अदालतका अनुसार ओबामाको कुकुर अपहरण गर्न लागेको सूचना पाउने बित्तिकै अनुसन्धान एजेन्सीले स्कर्टलाई वाशिंटनको एक होटलबाट गिरफ्तार गरेको हो । ओबामाको घरमा दुइवटा पोर्चुगिस वाटर प्रजातिका कुकुर छन् । एउटाको नाम बो र अर्कोको नाम सनी हो । ओबामाको कुकुर चोर्ने योजना बनाएका स्कर्टको गाडीबाट हतियार समेत बरामद भएको छ । ती बन्दुक समेत लाइसेन्स नलिइकन राखेको पाइएपछि उनीमाथि अवैध हतियार राखेको अभियोग पनि लगाइएको छ ।